निजी विद्यालयको ‘लुट’, लकडाउनमा डेढ लाख शुल्क ! अभिभावक भन्छन– ‘पढाई भएकै छैन, कसरी तिर्नु ?’
कोरोना भाइरसको महामारीले विश्व नै ‘लकडाउन’मा छ । यतिबेला सारा विश्व नै घरभित्र थुनिएका बेला नेपालका निजी विद्यालय भने विद्यार्थी र अभिभावकबाट हुँदै नभएको पढाईको शुल्क उठाउन तल्लीन छन् । काठमाडौँका ठूला भनिने निजी विद्यालयले धमाधम शुल्क उठाइरहेका छन् ।
शुल्क उठाउने नाममा कतिसम्म ब्रहुमलुट छ भने लकडाउनमा गाडी नचल्दा पनि निजी विद्यालयले यातायात खर्च शीर्षकमा १० हजारसम्म असुलेका छन । लकडाउनले स्कुल लागेको छैन । विद्यार्थीले पढ्न पाएका छैनन् । तर पनि निजी विद्यालयले सामान्य अवस्थाको जसरी ‘बिल’ भरेर घर घर पठाएका छन् ।
युलेन्सको दादागिरी, लकडाउनमा डेढ लाखको बिल !
ललितपुरको खुमलटारमा रहेको युलेन्स स्कुलमा हजारौ विद्यार्थी पढ्छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणा देउवा लगायतले सञ्चालन गरेको यो स्कुल अहिले लकडाउनमा शुल्क उठाउने हर्कतले चर्चामा छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भाइरल भएको पत्रअनुसार युलेन्सले लकडाउन अवधिमा मात्रै डेढ लाखको बिल प्रत्येक अभिभावकलाई पठाएको छ ।
जसमा मासिक शुल्क मात्रै ६६ हजार छ । लकडाउनमा गाडी ठप्प भएका बेला युलेन्सले गाडीको बिल मात्रै १० हजार ४ सय भएको भन्दै अभिभावकलाई तिर्न उर्दी जारी गरेको छ ।
नयाँ आर्थिक बर्षको बैशाख, जेठ र असार महिनाको एक लाख अन्ठाउन्न हजार रुपैयाँको बील युलेन्सले अभिभावकलाई पठाएको देखिन्छ । जबकी लकडाउनको अवधिमा पढाई नै भएको छैन । जुममार्फत भएको पठनपाठन पनि पत्रमा खुलाइएको छैन । तर एकाएक डेढ लाखको बील थमाएपछि अभिभावक अन्यौलमा परेका छन् ।
काठमाडौँ उपत्यकाका निजी विद्यालय मात्रै होइन, उपत्यका बाहिरका निजी विद्यालयको आतंक पनि उस्तै छ । झापाको विर्तामोडमा रहेको लिटल फ्लावर्स इङ्लिस स्कूलले कक्षा ५, ६ र ७ को मासिक चार हजार ४०० रुपैयाँ शुल्क तिर्न अभिभावकलाई दबाब दिएको छ ।
मासिक चार हजारका हिसाबले तीन महिनाको १३ हजार बढी शुल्क तिर्न अभिभावकलाई ताकेता गरिरहेको अभिभावकले गुनासो गरेका छन । मोबाइलमा म्यासेज गरेर शुल्क तिर्न स्कुलले दबाब दिएको अभिभावकहरुको गुनासो छ ।
सेन्ट मेरिजको भावुक पत्र
ललितपुर जावलाखेलकै सेन्ट मेरिज स्कुलले अभिभावकलाई भावुक पत्र लेखेको छ । कोरोना महामारीले सारा संसार ठप्प भएका बेला स्कुल खोल्ने कुरा कल्पनाभन्दा बाहिर रहेको भन्दै अहिले बालबालिकालाई अनावश्यक तनाव नदिन स्कुलले आग्रह गरेको छ ।
अहिले सबै ठाउँमा समस्या भएको र यसले अनिश्चितता निम्त्याएको भन्दै धैर्य गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । भावुक पत्र पठाएको सेन्ट मेरिजले भित्रभित्रै शुल्क मागेको गुनासो भने अभिभावकले गरेका छैनन् ।
अभिभावक भन्छन– ‘पढाई भएकै छैन, कसरी तिर्नु ?’
स्कुलहरुले निरन्तर शुल्क तिर्न ताकेता गरेपछि अभिभावक अत्तालिएका छन । लकडाउनमा घरखर्च चलाउनै मुश्किल भएका बेला शुल्क कसरी तिर्ने ? भनेर अभिभावक अन्यौलमा छन ।
नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष धर्मदत्त देवकोटा तत्काल शुल्क तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन । निजी विद्यालयलाई समस्या परे सरकारले हेर्नुपर्ने उनले बताए । ‘अहिले देश लकडाउन भएका बेला अभिभावकलाई बाच्न समस्या छ । त्यसमाथि पढाई भएको छैन । पढाई नभएको शुल्क कसरी तिर्नु ?’ देवकोटा भन्छन, ‘निजी विद्यालयको लुट मान्य छैन । समस्या परे सरकारले हेरोस । अभिभावकलाई तनाव दिने काम नहोस ।’
युलेन्स र रातो बंगलाले सरकार र कानुनलाई टेर्दैनन् !
अभिभावक महासंघका अध्यक्ष देवकोटा काठमाडौँका युलेन्स, रातो बंगला, जेम्स लगायतका विद्यालय सरकार र कानुनभन्दा माथि रहेको टिप्पणी गर्छन । उनीहरु प्याब्सन, एनप्याब्सनसँग आबद्ध नभएका र अभिभावकले पनि स्कुलको आतंकबारे कुनै गुनासो नगर्ने गरेको देवकोटाको भनाई छ ।
‘उनीहरुले कसैलाई मान्दैनन् । कुनै संगठनमा पनि आबद्ध छैनन्’ उनले भने, ‘सरकार र कानुनभन्दा पनि आफूलाई माथि सोच्ने उनीहरुलाई कसैले नियमन गर्न सकेको छैन ।’ शिक्षा मन्त्रालयले भने यसअघि नै शुल्क लिन नपाइने भनेर परिपत्र गरेको छ । केही दिनअघि निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको संस्था प्याब्सन र एनप्याब्सनले विज्ञप्ती निकालेर शुल्क उठाउने भनेका थिए ।
तर शिक्षा मन्त्रालयले अहिले लकडाउनको बेला शुल्क नउठाउन भनेपनि निजी विद्यालयले त्यसलाई बेवास्ता गरेका छन । जसका कारण विद्यार्थी र अभिभावक भने मारमा परेका छन ।-साभार नेपालबह्स